Ogaden News Agency (ONA) – Taliska Woyanaha oo khasaare badan kala kulmay kulamada uu ku qabto Wadamada Ree galbeedka
Taliska Woyanaha oo khasaare badan kala kulmay kulamada uu ku qabto Wadamada Ree galbeedka
Posted by ONA Admin	/ August 1, 2013
Gumeysiga Woyanaha ayaa waayadanba waday olole uu kusoo qaaday qurba joogta Qowmiyahada Ethiopianka iyo shacabka Somali weyn isaga oo raba innuu waxa yar ee dhaqaale soogala uu kasoo dhaco. Sidaas awgeed waxa gumeysigu bilaabay qorshaha Biya Xidheenka abbay midaas oo dhaqaale isaga oo raadinaya uu iskudayo in kulamo uu ku qabsado wadamada ree galbeedka.
Dadka Ethiopia ee qurbaha ku nool waxay kasoo horjeedaan gumeysiga Woyanaha oo ay u arkaan innuu xasuuq ka geysto dhulkaas. Waayadi hore waxaa qurba joogti ay abaabuli jireen banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan woyanaha. Waxaa hadaba labadalay qorshihii looga hortagayay Woyanaha kadib markii jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ay nidaam cusub oo lagu burburinayo shirarka Woyanaha ay soo saareen midaas oo ay bareen qowmiyadaha Axmaarada Iyo Oromada.
Gumeysiga Ethiopia ayaa sheegay in khasaare badan ay kala kulmeen shirarkii ay kuqabteen dibadaha, Bond aan gadno iska daaye waxaa khasaare aan ku jirnaa in Haalashii aan kiraysanay ee lacagtanada ku soo kiraysnay waxaa nagala wareegay mucaaradka Ethiopia ONLF Hoggaaminayso. Gumesiga Ethiopia ayaa sheegay inay dib uga fiirsan doonaan dadka kulamada usoo abaabula gaar ahaan kuwa aan aheyn Tigreega ee ka shaqeeya safaaradaha Ethiopia oo ay ku eedeynayaan inay mucaaradka xidhiidh laleeyiihiin.
Goobaha gumeysigu ku fashilmay waxaa kamid ahaa bilihii lasoo dhaafay wadanka Norwey, Canada iyo USA. Hoos waxaad ku arki doontan muuqaalki ugu danbeeyay meel ay rabeen Woyanuhu inay ku shiraan oo mucaaradka Ethiopia kala wareegay.
Woyanihi iyo dadkii uu soo casuumay ayaa halkkii ka cabsadaykadibna isaga tagay waxaana goobti shir iyo damaashaad ku qabsaday Mucaaradka Ethiopia hoo kadaawo.